Fanafody avy any Soisa
Ny fitantanana ny magazay amin'ny aterineto Swiss-apteka.com dia manome antoka ny tsiambaratelo feno ny vaovao voaray avy amin'ny mpampiasa voasoratra. Ny fepetra voalazan'ny fepetra fiarovana sy ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa dia mifototra amin'ny fitsipika ara-dalàna sy ny asan'ny Federasiona Rosiana.
Ny fampahalalana rehetra omenao mandritra ny fisoratana anarana dia ho tahiry anaty tahiry azo antoka. Ny tranombarotra Swiss-apteka.com dia miantoka ny tsiambaratelo tanteraka mandritra ny famonoana ny baiko, ary koa ny hoe ny fampahalalana momba ny mpividy dia tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny famonoana ny baiko voaray.
Ny angon-drakitrao dia mila ny tompon'andraikitra amin'ny fahafahanao mifandray amin'ny telefaona, ary ny tolotra fanafody dia afaka manolotra ny entana voafantina amin'ny toerana mety.
Ankoatra izany, amin'ny fisoratana anarana, azonao atao ny mahazo vaovao momba ny vaovao rehetra ao amin'ny magazay: famatsiam-bola vaovao, fivarotana, programa manokana.
Raha misy olana na fanontaniana momba ny fanomezan-dàlana sy ny fisoratana anarana ao amin'ny fivarotana dia soraty amin'ny mailaka info@swiss-apteka.com ary hanampy anao foana izahay!
Ny solontenan'ny fivarotana amin'ny aterineto Swiss-apteka.com dia tsy hangataka anao amin'ny karatra plastika na tsipiriany hafa tsiambaratelo.
1. Ny zavatra sasantsasany napetraka ao amin'ny tranokala dia ny fananana ara-tsaina ny tranokala Swiss-apteka.com. Ny fampiasana zavatra toy izany raha tsy misy ny faneken'ny tompon'ny tranonkala voarara.
2. Ny vohikalan'ny fivarotana an-tserasera Swiss-apteka.com dia manana rohy ahafahanao mankany amin'ny toerana hafa. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fampahalalana navoaka tao amin'ireo tranonkala ireo izahay, ary manome rohy ho azy ireo fotsiny mba hahazoana antoka ny mpitsidika ny tranokalanareo.
Fampahalalana manokana sy fiarovana:
1. Ny fivarotam-piarahamonina Swiss-apteka.com dia miantoka fa tsy hisy fampahafantarana azonao omena anao na oviana na oviana na oviana na oviana dia omena amin'ny antoko fahatany, afa-tsy araka izay takian'ny lalànan'ny Federasiona Rosiana.
2. Amin'ny toe-javatra sasany, ny magian'ny aterineto Swiss-apteka.com dia mety hangataka anao hisoratra anarana sy hanome vaovao manokana. Ny fampahalalana omena dia ampiasaina irery rehefa manamboatra baiko ao amin'ny fivarotana iray ao anaty aterineto na manome mpitsidika manana fahazoana vaovao manokana.
3. Ny fampahalalana manokana dia azo ovaovana, novaina na nofafana amin'ny fotoana rehetra ao amin'ny fizarana "Personal Cabinet".
4. Mba hanomezana anao ny mombamomba ny karazana iray, ny tranokala Swiss-apteka.com amin'ny fandefasana mazava anao dia afaka mandefa hafatra vaovao amin'ny adiresy imailaka voatondro mandritra ny fisoratana anarana. Azonao atao ny manoratra tsy tapaka amin'ny fotoana rehetra.
5. Ny fampahalalana ao amin'ity tranonkala ity dia avy amin'ny fampahalalana tsotra, ary misy fiovana afaka atao raha tsy misy fampahafantarana mialoha.
Ho an'ny raharaha rehetra mifandraika amin'ny fanarahamaso ny fenitra momba ny fiarovana, ny zon'ny mpamorona ary ny toe-javatra hafa - mifandraisa amin'ny fitantanana tranonkala amin'ny info@swiss-apteka.com
Ity ny katalaogin'ny faritry ny pharmacie any Soisa
Ny famerenana ny vokatra ho an'i Rosia raha tsy amin'ny fampiasana ny tena manokana sy amin'ny vola tsy mihoatra ny 1000 euro.
Tsy mividy afa-tsy amin'ny fivarotana ofisialy any Soisa ianao.
Katalana amin'ny vokatra momba ny fahasalamana Soisa miaraka amin'ny fandefasana any amin'ny firenena manerana izao tontolo izao.
Fividianana entana manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny orinasa iray any Genève
© 2011-2019. Fandefasana entana amin'ny alàlan'ny paositra avy amin'ny Pharmacy any Soisa Swiss-Apteka.Com